Madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay inuusan doorasho diidanayn, balse loo baahan in laga tashado | raascasayrmedia.com
← Dagaal xoogan oo ka dhacay magaalada baladwayne
Faroole oo loo jawaabay iyo xiriirka DF & Puntland oo wali mugdi hoose ku jira →
April 30, 2011 · 10:22 am
Madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay inuusan doorasho diidanayn, balse loo baahan in laga tashado
Madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo Jimcihii shalay kulan kula yeeshay xarunta madaxtooyada Soomaaliya golaha wasiirrada oo uu horkacayay ra’iisul waasare Maxamed C/llaahi Maxamed (Farmaajo) iyo xildhibaannno baarlamanka ka tirsan ayaa sheegay inuusan diidanayn doorasho, balse loo baahan yahay in lawada tashado.
Kulanka oo ay xubnihii ka qaybgalay ay isku qabsadeen aragtiyo ku saabsan xilliga kala guurka ah, iyadoo madaxweynaha Soomaaliya uu khudbad ka jeediyay kulanka kaddib markii la ururiyay fikradaha wasiirradii iyo xildhibaannadii goobjoog ka ahaa kulankaas.
“Anigu ma diidani in doorasho ay dalka ka dhacdo, hase yeeshee waxaa loo baahan yahay in laga wadatashado sidii xilliga kala guurka ah looga bixi lahaa iyo qaabka doorashada iyo xilliga ay dhacayso,” ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya, sidoo kale wuxuu sheegay in xukuumadda looga baahan yahay inay go’aan ka gaarto xilli kororsiga hay’adaha dastuuriga ah ee dowladda, baarlamaankuna uu ansixiyo.
Madaxweynuhu wuxuu si qoto dheer uga hadlay muddo kororsiga uu sida gaarka ah u sameysay baarlamaanka Soomaaliya, isagoo sheegay inuusan wax la tashi kala sameyn xukuumadda, isagoo sheegay inuu soo jeediyay in laga wadatashado xilli kordhinta baarlamaanku uu sameystay, balse aan soo jeedintiisa la horgeyn golaha baarlamaanka.
“Hay’adaha dastuuriga ah ee dowladda waxaa waajib uu ka saaran yahay sidii ay dalka uga badbadin lahaayeen dhibaatooyinka haysta, waana inay si wadajira ah uga shaqeeyaan sidii ay dalkooda iyo dadkooda u badbaadin lahaayeen,” ayuu yiri Sheekh Shariif oo xubnihii kulanka ka qaybgalay ay aad ugu sacab tumeen markii uu hadalkan ka dhawaajiyay.
Sidoo kale, madaxweyne Shariif, wuuxu sheegay in xukuumadda KMG ah ay horumar muujiyay muddadii yarayd ee ay dhisnayd isagoo ku boorriyay inay sii labalaabto dadaalka ay ku jirto oo uu ugu horreeyo sida uu sheegay sugidda ammaanka iyo jaangoynta siyaasadda dalka.
Mar uu ka hadlay guddiga doorashooyinka ayuu sheegay inaysan ahayn guddi magacaabiddiisa loo maray waddo sharci ah, wuxuuna sheegay in guddigaas uu magacaabay mas’uul sheegay inuu yahay murashax, taasina ay tahay arrin aan waafaqsanayn sharciga dalka.
“Waxaa loo bahan yahay in sharciga la ilaaliyo isla markaana la tixgeliyo duruufaha dalka ka jira, iyadoo dalka ay xaalado ammaan ka taagan yihiin in doorasho la isku mashquuliyana waxay dhaawici karaan dadaallada ay dowladdu waddo,” ayuu yiri Sheekh Shariif.
Ra’iisul waasaraha Soomaaliya Maxamed C/llaahi oo isaguna ka hadlay kulanka ayaa ka hadlay howlgallada ciidamada dowladda ay ka sameeyeen gobollada dalka qaar ka mid ah, isagoo sheegay inay guulo ka gaareen dagaallo ay la galeen xoogagga Xarrakatul Shabaab oo muddo ka talinaysay gobollada Koonfureed ee Soomaaliya.
Xubnihii wasiirrada iyo xildhibaannada ahaa ayaa iyaguna ku baaqay in si dhaqso ah lagu xalliyo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya ha’yadaha dowladda, iyagoo ka dalbaday madaxda hay’adaha dowladda inay sameeyaan tanaasul si la isugu raaco go’aan ay dowladdu howlaheeda ku dhameystiri karto.